Oyikholwa uvume izono zamkhalela | News24
Oyikholwa uvume izono zamkhalela
Nomhlakanipho Shinga, ILANGA
Johannesburg - Kuvuke ukukholwa esisebenzini sikaMasipala waseJozini, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal sasheshe saziceba, savuma amacala aso emuva kokuba izikhulu zalo masipala zisole ukuthi kunezisebenzi ezingaphezu kwama-50 eziyizipoki.
NgoLwesine, uNkz Nomfundo Mthembu, 32, obevele eNkantolo yamaCala ezeMali yaseThekwini ngoLwesine ngezinsolo zokukhwabanisa imali engaphezulu kuka-R252 000, kuthiwa usheshe wazivumela ukuthi kulezi zipoki ezingaphezulu kwama-50, yena ubeneziyisi-6.
Imithombo yeLANGA engaphakathi kulo masipala, ithi uNkz Mthembu obesebenza njenge-payroll officer, wenze amaholo ali-101, eholela izihlobo zakhe agcine evele nazo enkantolo.
Phakathi kwezipoki zakhe abevele nazo enkantolo, nguNkz Londeka Ndlovu, 20, uMnu Sibusiso Dlomo, 22, uMnu Lungani Dlomo, 30, uMnu Thubelihle Dlomo, 18, noMnu Siphamandla Dlomo, 20.
"Kulindeleke ukuthi kube nguyena ozocula asho ukuthi ngobani abesebenzisana nabo njengoba esheshe wazivumela awakhe amacala. Lokhu kusewukuqala nje kwaleli cala njengoba kusazoshuba kulo masipala. Kulindeleke ukuba kuboshwe abanye maduze kanti ibalelwa ezigidini imali abayiqolile," kusho umthombo.
Omunye umthombo uthe uNkz Mthembu uyikholwa elaziwayo okusolwa khona njengokuholele ekutheni asheshe avume izono zakhe. IMenenja kaMasipala waseJozini, uMnu Kuhlekonke Khumalo, ivumule ukuthi laba baboshiwe yathi okwamanje sinye isisebenzi sikamasipala esisaboshiwe.
"Noma lokhu kwenzeke mina ngingakafiki kodwa usemunye oboshiwe njengoba uphenyo lusaqalwa. Esikwaziyo wukuthi ukhona omunye ozovela enkantolo namhlanje ngoMsombuluko," kusho yena.
OLUNYE UDABA: Izakhamuzi zijabulele ukushona kowesilisa endaweni
Uthi izisebenzi zalo masipala kumele zifunde ngalesi sigameko ukuthi ngeke bayibekezelele inkohlakalo.
"Sibafundisile ngendlela yokuziphatha uma usebenzela uhulumeni nokuthi kumele ugqoke, ukhulume uphinde uziphathe kanjani uma usebenzela umphakathi. Abenza inkohlakalo bazophelela ejele," kusho yena.
Imeya yalo masipala, uMnu Delani Mabika, ithe yibona njengomasipala ababize uphiko loKlebe ukuba lungenelele ngoba bebona ukuthi uphenyo luzothatha isikhathi uma befuna abantu abasazoqale bacwaninge amabhuku baphinde bafune nemali eningi.
"Njengamanje sinye isisebenzi esisaphumele obala ngezipoki zaso ebesezihole imali engango-R252 000. Kasazi ukuthi lezi ezinye ziholelwe imali engakanani, esikwaziyo nje wukuthi bakhona abanye abasazoboshwa njengoba leli cala lisesephansi kakhulu. Kulabo abanezandla ezingcolile, ingalo yomthetho izogcina ifinyelelile kubona. Labo abanezandla ezihlanzekile, mabazigcine bemsulwa kanjalo nje," kusho uMnu Mbika. Uthi izisebenzi zalo masipala kumele zazi ukuthi inkohlakalo kayibuyiseli futhi bazimisele ngokulwa nayo.
"Yisona sifungo esisenzile njengomasipala ukuthi inkohlakalo ngeke siyimele,” kusho yena.
Okhulumela oKlebe KwaZulu-Natal, uCapt Simphiwe Mhlongo, uthe laba bakhishwe ngebheyili kanti bazobuyela enkanto mhla ziyisihlanu kuZibandlela (Disemba).
"UMthembu usolwa ngokuholela izipoki eziyizihlobo zakhe kusukela ngoNdasa wangonyaka odlule kuze kuya wuMasingana nonyaka. Uphenyo lusaqhubeka ngaleli cala kanti kulindeleke ukuba kuboshwe abanye maduze," kusho uCapt Mhlongo.